SolveigMM Video Splitter 3.2.1206.9 Final...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Video Splitter 3.2.1206.9 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Software ကောင်းလေးဖြစ်တာကြောင့် တင်ပေးလိုက်ရတာပါ...! တောင်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်အတွက် လည်းဖြစ်ပါတယ်...! ကျွန်တော် Key လေးတွေပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်...! သုံးရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်...! MPEG-2, AVI, WMV, ASF, MP3, WMA စတဲ့ ဖိုင်တွေကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်...! စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာ Mediafire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
- Supports MPEG-2 files – (.mpg, .mpeg, .vob, .ts )
- Supports AVI files – (.avi )
- Supports Windows Media files – (.asf, .wma, .wmv, .wm)
- Cut commercials – cutting off several movie portions at one time is allowed. You can get rid of all ads in your movie inacouple of simple steps
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 19.93 MB )
No Response to "SolveigMM Video Splitter 3.2.1206.9 Final...!"